မြင့်သော အရှိန် linear လျှပ်စစ် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > linear လျှပ်စစ် Actuator > မြင့်သော အရှိန် linear လျှပ်စစ် actuator
မြင့်သော အရှိန် linear လျှပ်စစ် actuator
AOX-L ကို ကို စီးရီး မြင့်သော အရှိန် lတွင်eတစ်ဦးr လျှပ်စစ် တစ်ဦးctuတစ်ဦးtor ဖြစ် တစ်ဦး အသစ်က generတစ်ဦးtiအပေါ် ၏ lတွင်eတစ်ဦးr တစ်ဦးctuတစ်ဦးtor,It အသုံးပြုမှု modulတစ်ဦးr ဒီဇိုင်း, နှင့် ကြွယ်ဝသော scတစ်ဦးlတစ်ဦးbility feတစ်ဦးtures ဘို့ တစ်ဦး vတစ်ဦးriety ၏ vတစ်ဦးlves တစ်ဦးnd similတစ်ဦးr products.Bတစ်ဦးsed အပေါ် technicတစ်ဦးl သဘောတရား တစ်ဦးnd ကြွယ်ဝသော အတွေ့အကြုံ, AOX compတစ်ဦးny's ထူးခြားသော technicတစ်ဦးl ကျွမ်းကျင်မှု ဖြစ် အဆိုပါ bတစ်ဦးsic မောင်းနှင်မှု ဘို့ce ဘို့ AOX-L ကို ကို စီးရီး မြင့်သော အရှိန် lတွင်eတစ်ဦးr လျှပ်စစ် တစ်ဦးctuတစ်ဦးtor တိုးတက်ရေး တစ်ဦးnd သိပ္ပံနည်းကျသော productiအပေါ်. AOX compတစ်ဦးny ဖြစ် ကြီးထွားလာ သို့ တစ်ဦး leတစ်ဦးdတွင်g compတစ်ဦးny တွင် vတစ်ဦးlve တစ်ဦးutomတစ်ဦးtiအပေါ် တွင်dustry နှင့် တစ်ဦးdvတစ်ဦးnced နည်းပညာ။
ချေး အဆင့်: Epoxy အမှုန့်အပေါ်ယံပိုင်း။ NEMA 4x ချေးကာကွယ်မှု
ဆက်စပ် စိုထိုင်းဆ: <90% (25Âဒီဂရီစင်တီဂရိတ်)
ဒေသဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်မှု / အော်တိုကိုင်
1 ။ AOX-L ကိုစီးရီးမြန်နှုန်းမြင့် linear များအတွက် switch ကို cam နဲ့ကန့်သတ်ရန် လျှပ်စစ် actuator
နှစ်ခုနှင့်အတူတင်းကျပ် အထက်တိကျတဲ့အခွံမာသီး, အ setup ကိုတစ်ခုဖြစ်သည်တစ်ချိန်ကတစ်ဦးချင်းစီ cam, သီးခြားစီသတ်မှတ်နိုင်ပါသည် ပြီးပြည့်စုံသော, တစ်ဦးချင်းစီ cam အမြဲဒီအနေအထားတွင်ရှိနေပါဦးမည်။
2 ။ စကေး စားပှဲ
AOX-L ကိုစီးရီးမြန်နှုန်းမြင့် linear ၏စကေးစားပွဲပေါ်မှာ လျှပ်စစ် actuator ဖြစ်ပါသည် စောငျ့ရှောကျဖို့ပိုအလိုလိုသိနှင့်အဆင်ပြေသောလမ်းညွှန်လှံတံပေါ်တွင် install လုပ်ပြီးသား။
တွင် တစ်ချိန်တည်းမှာ poduct အရည်အသွေးကိုသေချာ, ငါတို့သည်လည်းအသေးစိတ်အာရုံစိုက် ထိန်းချုပ်မှု, အထူးသဖြင့်ထုတ်ကုန်ထုပ်ပိုး, ချောထုပ်ပိုးထိရောက်စွာသေချာနိုင်ပါတယ် AOX-L ၏အသွင်အပြင် စီးရီးမြန်နှုန်းမြင့် linear လျှပ်စစ် actuator နှင့်ဖောက်သည်ကောင်းတစ်ဦးအတှေ့အကွုံပေးပါ။
နှင့် ပြည်တွင်းတွင်တီထွင်ထုတ်ကုန်များနှင့်ရိုသေလေးစားမှုအပေါ်ထားရှိတန်ဖိုး AOX ၏မူပိုင် R & D ကိုအဖွဲ့သည်လုံးဝအမျိုးသားရေး 96 ရရှိသောထားပါတယ် မူပိုင်ခွင့်။ ဒီစက်မှုလုပ်ငန်း၏ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနေအထားကိုထိန်းသိမ်းထားဖို့။ ကျွန်တော်ဆက်ပြီးဦးမည် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအာရုံစိုက်ခြင်းနှင့်အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးစံချိန်စံညွှန်းများအကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့်မြင့်မားသောဦးဆောင်လမ်းပြ အရည်အသွေးအ AOX-L ကို စီးရီးမြန်နှုန်းမြင့် linear လျှပ်စစ် actuator ။
မေး: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယ်လောက်ဖြစ်ပါသည် AOX-L ကိုအဘို့အနိမ့်ဆုံးအမိန့်အရေအတွက် စီးရီးမြန်နှုန်းမြင့် linear လျှပ်စစ် actuator?
ဖြေကျွန်ုပ်တို့၏နိမ့်ဆုံး အရေအတွက် 1 Piece ဖြစ်ပါတယ်။
မေး: သင်ကြကုန်အံ့ကျေးဇူးပြုပြီးမူမည် ကျွန်တော်တို့ကို AOX-L ကိုစီးရီးမြန်နှုန်းမြင့် linear လျှပ်စစ် actuator အကြောင်းကိုသင့်ရဲ့စျေးနှုန်းတစ်ခုစိတ်ကူးရှိသည်?
hot Tags:: မြင့်သော အရှိန် linear လျှပ်စစ် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်